[ Jan 12, 2022 ] करोडपति परेवा, जसको नाममा सयौं बिघा जमीन र लाखौँ नगद
मानिसको नाममा लाखौं करोडौंको सम्पत्ति हुनु अनौठो होइन । तर जनावर तथा चराचुरुंगीको नाममा करोडौंको सम्पत्ति हुनु चाहीँ आश्चर्य नै हो । यस्तै आश्चर्य छिमेकी मुलुक भारतमा छ । त्यहाँ करोडपति परेवाहरू छन् । पत्यार नलाग्न सक्दछ, तर…
[ Jun 24, 2021 ] मेस्सीजस्तै देखिने उनीमाथि २३ जना महिलासँग ढाँटेर यौन सम्बन्ध गाँसेको आरोप!
इरानका २८ वर्षका रेजा पारास्तेस ठ्याक्कै फुटबल स्टार लियोनल मेस्सी जस्ता देखिन्छन्। मेस्सीजस्तै देखिने भएकाले उनी रातारात सामाजिक संजाल इन्स्टाग्राममा चर्चित बने। सन् २०१४ देखि इन्स्टाग्राम चलाउन थालेका उनी सन् २०१७ देखि सबैले चिन्ने भए, कारण उनी मेस्सी जस्तै छन्। दैनिक सयौंले…
[ May 17, 2021 ] लकडाउनमा अनौठो निवेदन : सहवासका लागि जान पास चाहियो !
कोरोना भाइरस महामारीको दोश्रो लहरले उग्र रुप लिइरहेको बेला नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतमा समेत अधिकांश भागहरुमा लकडाउन भइरहेको छ । लकडाउनका बेला अत्यावश्यक बाहेकका सबै क्षेत्र बन्द गरिएका छन् । अत्यावश्यक कामका लागि घरबाट निस्कनुपर्ने मानिसहरुका…
[ Mar 01, 2021 ] ५३ वर्षअघि अन्टार्कटिकामा हराएको पर्स हात परेपछि…
पाउल ग्रिसामको वालेट ५३ वर्षअघि संसारकै पिँध अर्थात् अन्टार्कटिकामा हराएको थियो । यति लामो समय बितिसक्दा त उनले त्यो हराएको पर्स पनि बिर्सिसकेका थिए । तर ५३ वर्षपछि उनले आफ्नो त्यो हराएको पर्स हात पारे । सान डिएगोमा बस्ने ९१ वर्षका पाउलको हातमा उनको हराएको पर्स…
[ Feb 09, 2021 ] अर्बपति मुकेश आम्बानीको रहस्य – घरमा ६ सय कामदार, १७० भन्दा बढी कार
भारतका व्यापारी मुकेश आम्बानीको नाम संसारकै धनी व्यक्तिहरूको सूचीमा समावेश छ । आफ्नो कडा परिश्रम र समर्पणका साथ रिलायन्स इन्डस्ट्रीजका मालिक मुकेश आम्बानीले आफ्नो व्यापार बढाएका हुन् । आफ्नो टीमसँगै, उनले आफ्नो व्यवसायमा दिन र रात मेहेनेत गरिरहेका छन् । आम्बानी पनि शाही शैलीमा आफ्नो जीवन बिताउनका लागि परिचित छन्…
[ Nov 17, 2020 ] २२ करोडमा बिक्यो एउटा परेवा
काठमाडौं । एउटा परेवाको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? बेल्जियममा एउटा परेवा २२ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यमा बिकेको छ । बेल्जियममा एउटा रेसर परेवा १९ लाख डलरमा बिक्री भएसँगै दुनियाको सबैभन्दा महंगो परेवाको कीर्तिमान कायम गरेको छ । न्यू किम नामको उक्त…
[ Oct 18, 2020 ] सुनभन्दा महँगो किन हुन्छ ह्वेलको बान्ता ? यस्तो छ रोचक तथ्य
काठमाडौं । कहिलेकाहीँ मानिसको तालुमा आलु फल्दछ र एकै झट्कामा मान्छे रोडबाट करोडमा पुग्दछ । ताइवानमा एकजना व्यक्तिको जीवनमा यस्तै चमत्कार भएको छ । एक सुनसान टापुमा घुम्दै गरेका ती व्यक्तिले गोबरजस्तो कडा र सुख्खा चिज फेला पारे । उक्त वस्तुबाट अनौठो…
[ Oct 16, 2020 ] यी पुरुषले किन गरे सर्पसँग बिहे ?
यो दुनियाँमा कहिलेकाहीँ निकै अनौठा कुराहरु सुन्न पाइन्छ । ठूला बडाको कुरा छाडौँ, आम मान्छेले सामान्यरुपमा बिहे गर्दा चर्चाको विषय बन्दैन । तर जबकि कुनै मानिसले सर्पसँग बिहे गर्दछ, त्यो सर्वत्र चर्चाको विषय बन्दो रहेछ । थाइल्याण्डका एकजना युवकले विषालु सर्पसँग बिहे…
[ Oct 08, 2020 ] फिनल्याण्डमा प्रधानमन्त्री पद एक दिनको लागि १६ वर्षीया किशोरीलाई हस्तान्तरण !
फिनल्याण्ड : लैंगिक समानताका लागि उत्कृष्ट देशमध्ये फिनल्याण्ड पर्छ । प्रधानमन्त्री सन्ना मरिनले हालै त्यसको थप उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छन् । १६ वर्षीया किशोरीलाई एक दिनका लागि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्दै मरिनले उदाहरणीय कदम चालेकी हुन् । आभा मुर्तो नामकी ती किशोरी…
[ Oct 04, 2020 ] अन्तरिक्षबाट समेत अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा मतदान ! यसरी हुन्छ बन्दोबस्त
हामीकहाँ विदेशमा बस्ने नेपालीहरुका लागि समेत देशमा हुने चुनावमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले नेपालमा हुने चुनावमा भोट हाल्न पाउने व्यवस्था निकट भविष्यमा हुन गाह्रै पर्ला । तर उता अमेरिकाले चाहीँ अन्तरीक्षमा रहेका आफ्ना नागरिकहरुले समेत…
[ Sep 30, 2020 ] मुसाले पायो स्वर्ण पदक !
लन्डनमा मगावा नामक एक मुसालाई पीडीएसए स्वर्ण पदक दिइएको छ । यस्तो पदक पशुहरूको बहादुरीका लागि दिने गरिन्छ । मगावा मुुसाले ३९ भन्दा बढी ल्यान्डमाइन र अन्य विस्फोटक पदार्थ पत्ता लगाइसकेको छ । ल्यान्डमाइनको भनक पाउनेबित्तिकै उसले भुइँ खोस्रिन थाल्छ अनि उसका…
[ Sep 11, 2020 ] यो हो विश्वकै महँगो तरकारी, १ किलोको मूल्य डेढ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । मान्छेले खाने तरकारी यतिसम्म महँगो हुन्छ भन्ने कुरा जो कोहीलाई पत्यार नलाग्न सक्दछ । तर यो दुनियामा एउटा यस्तो तरकारी छ, जसको मूल्य एक किलोकै झण्डै डेढ लाख रुपैयाँ पर्दछ । सोही कारण यो तरकारी विश्वकै सबैभन्दा महँगो तरकारी बनेको…
[ Sep 08, 2020 ] अमेरिकाको यो शहरमा छैन मोबाइल, वाईफाई र रेडियो : कस्तो होला जनजीवन ?
काठमाडौं — आजकलका मानिसको सबभन्दा प्यारो वस्तु मोबाइल फोन बनेको छ । उनीहरू जतिखेर पनि मोबाइलमा झुण्डिरहेका भेटिन्छन् । तर अमेरिका जस्तो विकसित देशमा एउटा यस्तो शहर छ, जहाँ न मोबाइल छ, न वाईफाई छ, न रेडियो छ । वेस्ट भर्जिनियामा पोकाहोन्टास…